Elu na-agbaji waya | induction igwe ihe eji eme oku | ihe ndozi oku
Ngwongwo na-agbanye ike ugboro ugboro
Ngwunye nke nkwụnye aka nke Co-axial
Ngwunye nke na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ
Ebumnuche Iji ree ahia na onye na-echebe mkpuchi nke nzukọ waya na 500 (250) Celsius F (Celsius C).
Ihe • Ụlọ mgbakọ ndị ahịa
• Okpomọkụ na-egosi agba
• Ntanye na-eme ka mmiri na-ehicha
Okpomọkụ 500 (250) ° F (° C)
272 kHz ugboro ugboro
Akụrụngwa DW-UHF-4.5kW sita sistemụ ọkụ, kwadebere ya na ọdụ ọkụ dịpụrụ adịpụ nwere ihe nchekwa 0.33 μF abụọ. Ejiri ikpo oku na-ekpo ọkụ na-emepụta nke ọma maka ngwa a.
Usoro A na-eji ọtụtụ eriri igwe na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie ma na-egosipụta agba na-egosi okpomọkụ na mpaghara nkwonkwo. A na-etinye nzukọ waya ahụ na eriri ọkụ ọkụ ọkụ, tinyekwa ike RF. Oge na-ekpo ọkụ na usoro kpo oku na akụkụ ahụ ka edobere. A na-etinye mgbakọ waya na-esote na eriri igwe, a na-ekpokọta mgbakọ ahụ ma na-etinye waya na-ere ọkụ n'ime nkwonkwo. Nzukọ ahụ na-ekpo ọkụ nke ọma ma rute 500 Celsius F na 10 sekọnd.
Nsonaazụ / Uru • mkpochapụ usoro mpempe akwụkwọ
• enwere njikọ ndị ọzọ
• usoro ngwa ngwa
Categories Technologies Tags Ngwongwo na-agbanye ike ugboro ugboro, RF eriri igwe, eriri ígwè, eriri ígwè na-arụ ọrụ, eriri waya na njikọ, eriri ntanye iji pin, eriri waya na waya